Google agakwaghị arụpụta smartphones ya na China | Androidsis
Google agakwaghị arụpụta ama ya na China
Agha akụ na ụba n'etiti United States na China Ọ na-efu ndị nrụpụta US na-arụ ọrụ n'ime mgbidi China ntakịrị oke ọnụ. Nke a bụ n'ihi na mba North America nọ na-etinye mmachi n'obodo ahụ, dị ka mmeghachi omume na ụfọdụ amụma gọọmentị nke Xi Jinping were, na nke ọzọ.
Affectedlọ ọrụ dị ka Apple emetụta, n'ihi ya, ha emeela atụmatụ imepụta ụfọdụ ma ọ bụ ngwaahịa ha niile na mba ndị ọzọ, nke a bụ ihe Google Enwere ike itinye ya na ya pixel smartphones, dị ka akụkọ ọhụrụ ahụ si pụta n'oge na-adịbeghị anya.
O doro anya na Google na onye mmekọ a na-amaghị na-arụ ọrụ na mmegharị nke ụlọ ọrụ mbụ Nokia na Bac Ninh, ugwu Vietnam, inwe ike imepụta igwe Pixel. Ebe ndị a na-amaghị aha na-ekwu na akụkụ nke mmepụta Pixel 3a ga-agarịrị na osisi Vietnam mgbe afọ a gachara. Ọ bụghị ụdị Pixel niile nwere ike ịme ebe ahụ site na igbe ahụ, mana nke a ka ga-ahụ. Companylọ ọrụ ahụ ekwupụtabeghị ihe ọ bụla. Ya mere, a na-enye nke a dịka atụmatụ karịa ihe ga-eme ee ma ọ bụ ee.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ gaghị eju anyị anya ma ọ bụrụ na a rụchaa ụdị ọrụ a. Nke a ga - abụ ihe bara uru na obere oge maka ụlọ ọrụ Mountain View, ebe ọ bụ na ga - enyere aka igbochi nsogbu dị n’etiti China na Amerịkà ịgba gị.
“Google nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ ụfọdụ na China. Companylọ ọrụ America ahụ maara na ọ bụrụ na ọ ga-adị njọ maka nrụpụta ngwaike, ọ nweghị ike ịkwụsị na nnukwu ahịa ndị China. Otú ọ dị, ha ghọtakwara na n'ihi ụba akwụ ụgwọ na gburugburu ebe obibi, ha kwesịrị inwe mmepụta na mpụga China ogologo oge iji kwado nrụpụta ngwaike ha, "ka isi mmalite ahụ na-amaghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google agakwaghị arụpụta ama ya na China
Egwuregwu Honor ohuru nwere ike ịmalite
Google Maps na-agbakwunye oyi akwa Street View na ngwa ahụ, anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ